GCINA I-250K KUBUGCISA OBUCOKISEKILEYO NAMHLANJE NGEEMASTERS - INDLELA YOKUPHILA
Gcina i-250k kubuGcisa obuCokisekileyo namhlanje ngeeMasters
Kule mihla nakweli xesha, abantu abaninzi nangakumbi bajonge ukwenza intshukumo elungileyo ngemali yabo, rhoqo ngokutyala imali. Endaweni yokuhamba ngendlela eqhelekileyo yeestokhwe, iibhondi kunye nee-cryptocurrensets, ezinye zithathe ukutyala imali kwilizwe lobugcisa Umsebenzi wobugcisa .
Dibana nemisebenzi yobugcisa: Iqonga lokuTyala imali loMsebenzi wobugcisa
Umsebenzi wobugcisa liqonga elipheleleyo lokutyala imali kubugcisa beli xesha. Yeyona yokuqala yohlobo lwayo, ukwenza ukuthenga nokuthengisa izabelo, ezimele utyalomali oluyinxalenye yobugcisa obunemifanekiso, indlela enomdla yokwahlula iphothifoliyo.
Abantu abavela kwihlabathi lonke bathatha umdla kwiqonga, kwaye kusengqiqweni ukuba kutheni. Inika abantu bemihla ngemihla ithuba lokutyala imali kwimizobo yezigidi zeedola okokuqala ngqa.
Ihlabathi lezeziMali lithatha inzala kutyalo mali olusekwe kubugcisa
I-Artprice kutsha nje iqaphele indlela ubugcisa be-chip-blue obugqwese ngayo i-S & P 500 nge-174% phakathi kwe-1995-2020. Ukongeza, i-Deloitte ngoku iqikelela ixabiso elipheleleyo lobugcisa kunye nezinto eziqokelelweyo ziyi- $ 6 trillion. Ngoku, uJoe wemihla ngemihla eneminye imali anokuyisebenzisa unokutyala imali kolu didi lweeasethi lungafakwanga.
Ingelosi yokufa yomkhono we tattoo
Yintoni ebeka i-Masterworks ngaphandle kukusetyenziswa kwedatha yayo yobuninimzi ekufundeni imakethi yezobugcisa, ichonga ukuba ngabaphi na amagcisa anamandla exabiso kwaye anika elona thuba lilungileyo.
Iqela lokufumana izinto kwi-Masterworks likhangela kwimarike, likhangela ezona ziqwenga zibalaseleyo zehlabathi ngamaxabiso aphezulu. Ke umsebenzi wobugcisa ukhuselekile.
Ngamanye amagama, isetyhula enikezelwayo ifakwe kwi-US Securities and Exchange Commission (SEC), enika uluntu ithuba lokwenza utyalomali.
Isebenza Njani imisebenzi yobugcisa?
Umsebenzi wobugcisa wenzelwe ukuba ubanjwe ngokungenammiselo de uthengiswe. Okwangoku, abatyali-mali banokukhetha ezimbini. Banokudlala umdlalo wokulinda, ngethemba lokuvelisa inzuzo xa kuthengiswa umzobo. Enye into kukuthengisa izabelo kwintengiso yesibini ekhulayo.
Imakethi yesibini ivumela abatyali mali ukuba bathenge kwaye bathengise izabelo omnye komnye. Kufuneka iqatshelwe ukuba okwangoku ngabemi baseMelika (i-USA) kuphela abanokuthatha inxaxheba kwimarike yesibini, kwaye kufuneka babe neakhawunti yebhanki esekwe e-US ukwenza njalo.
Ukuphazamiseka kwimarike yiNorm entsha
Umsebenzi wobugcisa iyazingca ngeentsika ezininzi. Eyokuqala lula ukufikelela kuluntu. Okwesibini, akukho ntlawulo iphuma epokothweni yotyalo mali okanye yorhwebo. Kufuneka iqatshelwe, nangona kunjalo, ukuba izabelo zifumaneka kuphela kwiintsuku ezingama-90 emva kokuvalwa komrhumo ophambili.
Ubumnandi kunye nobuhle behlabathi lobugcisa, kunye nokuhambelana kwemali kwimarike epheleleyo, kwenza i-Masterworks ibe yindawo enomdla apho umntu anokutyala imali ngokulula. Ezi ziindaba ezimnandi njengoko ubhubhane eqhubeka nokuthumela amaza kwezinye iimarike.
Iingxelo zezoqoqosho zibonisa ukuba ibhondi ye-treasury ivelisa ukunyuka kwiindawo ezidlulileyo zembali ngelixa izitokisi zihlala zixabise. Umzekelo, i-S & P 500 ithengise i-35x P / E. Akukabikho xabiso liphezulu kangaka ukusukela ngo-2001 dot-com crash.
Ngokwembali, ubugcisa ibilulondolozo oluthandwayo kubutyebi be-uber ukusuka kwiintsapho zasebukhosini ukuya kwiinkwenkwezi zobuchwephesha. Ngapha koko, i-61% yabantu abanexabiso eliphezulu baqokelela ubugcisa, kunye ne-72% yeebhanki zabucala kunye neeofisi zosapho zibonelela ngeenkonzo zotyalo-mali ezinxulumene ngokuthe ngqo kwilizwe lobugcisa.
Olunye uphononongo lweDeloitte luye lwabonisa ukuba i-86% yabacebisi bezobutyebi bayifumana ingcinga enobulumko yokubandakanya ubugcisa njengenxalenye yeminikelo yabo. Ukuthathela ingqalelo ukuba amaxabiso obugcisa beli xesha ayigqithile i-S & P nge-174% ukusukela ngo-1995 ukuya ku-2020, oku akothusi.
Kwixesha elidlulileyo, nangona kunjalo, ukuqhekeka kule marike bekungekho nokwenzeka kubatyali mali abaneebhajethi ezincinci. Iziqwenga eziphambili zingabiza amawaka ukuba ayingamakhulu ezigidi zeedola. Ngokuqhelekileyo iziqwenga ezixabiseke kakhulu ezigcina ixabiso lazo.
Umsebenzi wobugcisa kunye nabasebenzi bayo abangama-95 banenjongo yokuphazamisa imiqobo ngokuba yinkampani yokuqala ukwenza ukuba abatyali mali bakwazi ukongeza ubugcisa beli xesha kwiipotfoliyo zabo. Ukuza kuthi ga ngoku, ngaphezulu kwama-200,000 abasebenzisi babhalisile, bejonge ukuthenga izabelo zemizobo ngamagcisa anje ngeMonet, iBasquiat, i-KAWS, kunye neBansky.
Ukusukela ukuphuma emhlabeni ngo-2019 (Q2), ngaphezulu kwe- $ 200,000,000 kutyalwe imali kwi-Masterworks. Kubandakanywa imirhumo engama-70 + yeReg A, efanelekayo kwi-SEC, engeyonto encinci.
Ibali leMpumelelo loMsebenzi
rose tattoo esihlahleni esincinci
Ewe! Umzobo wokuqala uthengisiwe, Iibhanki zikaMona Lisa kukhokelele kwimali engama-32% yomvuzo kubatyali mali. Ngo-Okthobha ka-2019, eli qhekeza lanikezelwa kubatyali mali nge- $ 1,039,000. Yathengiswa nge- $ 1,500,000 kamva. Nguye kuphela umzobo othengisiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ukususela ngelo xesha, imarike yaseBansky iye yanda ngakumbi, ikhawulezisa njengoko ihamba. Oku kuthetha ukuba ithuba lembuyekezo ekhoyo likhona nethuba lokusasaza imali kwiitransekshini ezizayo, nangona ukusebenza kwangaphambili kungangabonakalisi kwiziphumo ezizayo.
Basquiat ngomnye umculi othandwayo eqongeni.
Umculi we-NYC ongasekhoyo waseHaiti nasePuerto Rican wehla waduma ngeminyaka yoo-1970 kwindawo yobugcisa eManhattan eseMpuma. Kwiminyaka elishumi kamva, imisebenzi yomculi yanconywa ngabagxeki kunye nabathandi bobugcisa, bemfumana indawo kwiigalari ezaziwayo zamanye amazwe kunye neemyuziyam.
iitatto ezithandwa kakhulu ngabafana
Ubugcisa bakhe bubonisa imixholo enxulumene ne-rap, ubugcisa basesitratweni, kunye ne-punk. Nangona umzobi wasweleka eneminyaka eyi-27 ngenxa yokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi, ixabiso lobugcisa bakhe liyaqhubeka nokukhula njengoko imisebenzi yakhe ifumana abalandeli abatsha unyaka nonyaka. Nokuba uJay-Z ukhuthazekile ngumculi.
I-Masterworks ineziqwenga ezininzi zeBasquiat kuluhlu lwayo olunjengeMosque, Ukuthambeka, kunye nesiqwenga esingenasihloko (Bracco di Ferro).
Sika umgca kwaye utyale imali ngemisebenzi yobugcisa
Akukashiywa lixesha ukuba uqalise nge-Masterworks. Okwangoku, mininzi iminikelo evulelekileyo kubatyali mali, kwaye ukutyala imali kubugcisa be-chip-blue akukaze kube lula
Kuthekani nge-imali yedatha? Kukho i-hype eninzi ngoku, kodwa yonke imakethi yobugcisa eqokelelweyo ibikho kangangeenkulungwane. Kuqikelelwa ukuba kuphindwe kane kunezo zekrypto zanamhlanje.
Ukongeza, ubugcisa budume njengomdlalo owahlukileyo wepotifoliyo yotyalo-mali kuba ixabiso layo alibotshelelwanga ngokulula kwimarike yemasheya. Ukubaluleka kwenkcubeko akunakulindeleka ukuba kwehle ngenxa yobhubhane okanye amaxabiso aphezulu egesi. Umsebenzi wobugcisa usinike ikhonkco elikhethekileyo ukuze abafundi bethu bafumane ukufikelela phambili kwiminikelo yabo
Tsiba uluhlu lokulinda kwaye uqalise nge-Masterworks namhlanje.
Bona izaziso ezibalulekileyo: Cofa apha .
Bona ngakumbi malunga - Ezi-12 ziBalaseleyo kwiiMveliso zeFanitshala yaseMelika
iinwele ezihamba neendevu
iiTattoo zobambo ezipholileyo kubafana
pokemon tattoos emnyama namhlophe
Uyilo lwesiqingatha semikhono yabasetyhini
Ilanga nenyanga umvambo kubafana
ncuma ngoku khala kamva intombazana ijongile
Izitena kunye nezindlu zamatye